China Brand New2Pac Doors Kitchen Cabinet ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - J&S
ကျွန်ုပ်တို့သည် Brand New2Pac Doors Kitchen Cabinet.U ကိုပုံသဏ္န်မီးဖိုချောင်များတွင်အလုပ်တြိဂံတစ်ခုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Brand အသစ်2Pac Doors Kitchen Cabinet.U ကိုပုံသဏ္န်မီးဖိုချောင်များတွင်အလုပ်တြိဂံတစ်ခုရှိသည်။ မီးဖိုချောင်သုံးသူများသည်အစားအစာနှင့်ပန်းကန်များကိုပြင်ဆင်ရာတွင်ကျယ်ဝန်းသည့်အလုပ်နေရာတစ်ခုရှိသည်သာမကမီးဖိုချောင်အပြင်ဘက်ရှိလူများနှင့်လည်းအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အမှောင်အရောင်သည်ဂန္ထဝင်၊ ထာဝရ၊ အဆင့်မြင့်ပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာ ၀ တ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ချက်ပြုတ်သူတစ်ယောက်အတွက်ကြီးမားသောအလုပ်နေရာကိုဖန်တီးပေးသည်။ laminate ၏ပစ္စည်းသည်ခြစ်ရာနှင့်အပူဒဏ်ခံနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
2PAC မီးဖိုချောင်ဗီရိုအံဆွဲကက်ဘိနက်သည်သင်၏မီးဖိုချောင် (သို့) မည်သည့်အခန်းကိုမဆိုပိုမိုလွယ်ကူ။ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သည်။
Brand New မီးဖိုချောင်ဗီဒိုများ
Brand အသစ်2Pac Doors Kitchen Cabinet ၏ Parameter
2 Pac မီးဖိုချောင်ဗီဒိုများနှင့်တံခါးများ၊ ကျဉ်းသောမီးဖိုချောင်ဗီဒိုများ
Brand New Kitchen Cabinet များ
Details of Brand အသစ်2Pac Doors Kitchen Cabinet
BLUM & DTC: နိုင်ငံတကာထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ပူးပေါင်းပါ။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ၀ န်ဆောင်မှု။ HIGOLD, NUOMI ကဲ့သို့ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်မီးဖိုချောင်သုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများပေးသွင်းသူနှင့် ပူးပေါင်း၍ အိမ်တစ်အိမ်လုံးအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းနည်းများကိုအမြဲတစေတီထွင်ဆန်းသစ်တီထွင်လျက်၊ ပိုမိုအသိဥာဏ်၊ အဆင်ပြေပြီးခေတ်စားလာသောမီးဖိုချောင်သိုလှောင်မှုစနစ် hardware hardware စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းနည်းများကိုတီထွင်သည်။ ဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးမှ ၀ န်ဆောင်မှုအထိကျွန်ုပ်တို့သည် J & S ၏ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးများကိုအမြဲတိုးတက်စေသည်၊ ၀ ယ်သူများအတွက်တန်ဖိုး ဖန်တီး၍ မိသားစုများပိုမိုအရည်အသွေးမြင့်အိမ်ရာကိုရရှိစေသည်။
Q. ထုတ်လုပ်မှု ဦး ဆောင်ချိန်နဲ့ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းကဘယ်လိုလဲ။
A: ထုတ်လုပ်မှု ဦး ဆောင်ချိန်သည်ကန ဦး အမှာစာအတွက်ရက် ၄၀ နှင့်ပြန်လည်မှာယူမှုအတွက် ၂၅-၃၅ ရက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းသည် ၁. ၃၀% T/T ဝါယာကြိုးအရောင်းအ ၀ ယ်သဘောတူညီချက်နှင့်သင်္ဘောစာရွက်စာတမ်းများအပြီး ၇၀% မျှခြေဝါယာကြိုး
A: ကျွန်ုပ်တို့တွင်မီးဖိုချောင်ဗီဒိုများ၊ တံခါးပုံစံ၊ ကောင်တာထိပ်၊ ဖောက်သည်များ၏ရွေးချယ်မှုများအတွက်ထုပ်ပိုးမှုရှိသည်။
hot Tags:: Brand အသစ်2Pac တံခါးမီးဖိုချောင်ဗီဒိုများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ စတော့၊ အစုလိုက်၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သက်သာသာ၊ လျှော့စျေး၊ အနိမ့်ဆုံးစျေး၊ လျှော့စျေး ၀ ယ်၊ စျေး၊ စာရင်း၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကား၊ ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း၊ ၅ နှစ်အာမခံ၊ Classy၊ Fancy